Gawracato - Diphtheria - Somali Kidshealth
Gawracato – Diphtheria
10/05/2013 20/05/2013 by admin
Gawracatadu waxay weerartaa qaybta hore ee habdhiska neef-qaadashada sida sanka iyo hunguriga cad, ee ay hawadu marto. Cuddurkaan waa cuddur aad u faafa oo lagu kala qaado marka ilmo ama qof qabaa uu hindhiso ama qufaco oo uu hawada galiyo dhibco ay ku laran tahay baakteeriyadii Gawracatada keenaysay.
Marka uu jirka soo galo jeermiga keena gawracatadu waxay qofka calaamadaha cuddurku uga soo bixi karaan inta u dhaxaysa maalin ama asbuuc. Soomaalidu cuddurkaan magac fiican bay u heshay, waayo sida uu u dhaco cuddurkaani waa baakateeriyada keenta gawracatadu waxay ku sii daysaa nudayaasha ku yaal neef-mareenka sida cunaha iyo sanka sun, taas oo ku keenta in xubnahaas uu ku dahaarmo xuub jilif ah oo yareeya dhumacda hawo-mareenka. Sidoo kale gawracatadu waxay bararisaa qanjirada luqunta ku teedsan.
Ilmo gawracato qanjirada luqunta bararisay – Courtesy of Wikipedia
Calaamadaha lagu garto Gawracatada
Qandho sare oo gaarsiisan ama ka badan 38°C oo dhaxan wadata
Midabka maqaarka jirka oo baluug isku badala.
Xabbeeb iyo cunno xannuun
Qufac iyo madax-xannuun
Wax liqida oo dhib noqota
Neefta oo qofka ku dhegta
Qanjirada luqunta oo bar-barara
Haddii aad wajahday ama aad maamushay qof la jirran gawracatada u sheeg dhaqtarkaaga oo waydii in aad antibiotic qaadan karto iyo inkale
Awooda tallaalku waxay jiraysaa muddo 10 sanno ah, markaa dadku waxay u baahan yihiin tallaal xoojiye ah 10 sanno kasta ka dib.
PrevDabaysha – Poliomyelitis
nextQaaxada – Tuberculosis